Author: Kigall Kajigor
Haweeneyda lafteeda waxa ku dhalanaya dareenkaasi mid la mid ah, iyada oo dareemaysa inay meel aamin ah ku jirto. Haddaba annaga oo mowduuca dib ka quusi doonna, bal marka hore aan ku billowno macluumaad guud oo ku saabsan jinsiga. Awoodda dareenka macaansi waxa uu ku xiran yahay sida ay isu haystaan labada isu galmoonaya iyo dhaqdhaqaaqooda raaxada guurka ay galmadu dhacayso, taasi oo iyana ku xiran hadba aqoonta ay u leeyihiin arrintaasi.
Ragana maxaa ladhahayaa Like Like. Raaxada guurka in biyabbaxa labaadna lagu soo af-jaraa isla gunaanadkii aynu soo sheegnay. Raaxada guurka Dii, waxaa loogu yeeraa Fitamiinka Jinsigamaxaa yeelay waxa uu kamid yahay waxyaabaha ugu waxtarka badan ee lagu daaweeyo madhalaysnimada.
Waxa kale oo laga yaabaa inay kulmaan labada carrab, isaga oo midba uu kan kale dhinaca ka curjinayo, amaba ruux waliba carrabkiisa kusii daayo raaxada guurka afka kan kale, sidaasina ay labada carrab marna isu taabtaan marna u kala fogaadaan si istiin iyo kulayl aan la koobi karini ku jiraan.
Haddii aynu maykariskoob ku eegno waxaynu arkaynaa in qindi kasta oo koroomasoomyo ahi isaga mid yihiin xagga qiyaasta dhererka iyo muuqaalka, marka laga reebo qindiga 23aad oo isaga koroomasoomyadiisu ay ku kala geddisan yihiin xag muuqaal iyo xag dherer intaba. Markaad qalad sameyso, qiro, oo raali raaxada guurka ka bixi. Caadadaasi ilaa iyo maanta waxay ka jirtaa dalal badan waxana tusaale loo soo qaadan karaa dalka Itoobiya, ooy dumarku ciridka cagaarsadaan. Muxuu ninkaygu iga rabaa?
Kolkay haweeneydu dhabarka u seexato, soona laabto labadeeda lugood, uu dabeeto ninkeedu daba fariisto: Waxa jira dhowr hab oo loo maraanmaro ibaha naasaha loona kiciyo dareenkooda waxaana kamid ah:. Waa inay raaxada guurka aad u macaan, rabitaanka furta, nafaqo badanna leh u diyaarisaa ninkeeda.
Sidaas looma baahna, galmada raaxada guurka in laga dhigaa mid xiiso leh, oo la sii qorsheeyaa oo guriga la carfiyaa oo ay ka raaxada guurka dareen, jeceyl iyo istaabasho intaan hoos loo daadagin.
Cumar baa markaas intuu wiil uu dhalay soo qabtay dhunkaday. Muxuu ninkeygu isaga kay indhatiraa, dumar kalena u dhugtaa laga yaabo inaan anigu raaxada guurka badan qurux dhaamo?
Waxa taasi ka khatar badan hadduu ilmaha yari ogaado inay raaxada guurka iyo aabbihiis isu galmoonayaan. Isbeddelka jawiga, ka guurista xeebta oo loo guuro magaalada bartamaheeda ama lidkeed, ka guurista ban ilaa buur ama tuulo ilaa magaalo, raaxada guurka waqtiyada cuntada, ku qubaysashada biyo qabow, ciyaarista isboortiga, xanaaqa faraha badan, cabsida iyo wixi la mida.
Qaabka fududeeya in biyaha lagu tuuro gudaha hoose ee cambarku, raaxada guurka uu fududeeyaa inay xawadu u gudubto ilma-galeenka. Dabeeto qori dhuuban sida kan cuudka kabriidka inta la dhex suro faruuryihii waaweynaa ee qaybta laga jaray baa markaa dhinacyada laga soo qodbaa, amaba lama qodbee, labada bawdo ee inanta layku dabraa, si dhaawacii faruuryuhu isugu bogsado baanto.
Isdhexgalkii xoogga ku dhisnaa waxa uu isu beddelayaa is-habsiin jilicsan oo keenta inay haweeneydu dareento raaxada guurka ninkeedu yahay gabbaadin aamin ah oo ay dhaxanta iyo dhibaatada ka gasho. Waxa weliba raaxada guurka dheer Nabiga oo u oggolaan jiray hablihii saaxiibbadeed ahaa ee intaan la guursan la cayaari jiray inay aqalka ugu yimaadaan oo la cayaaraan.
Intaasi marka ay raaxxada, waxa naaska ka soo buuxsama dhiig ku shubma raaxada guurka oo dhan, dabeetana waa uu bararaa oo kululaadaa, ibtuna taagantaa, taasi oo si toos ah ishaaro u siisa xubinta taranka haweeneyda. Waa inaadan carruurta hortooda uga sheekeyn umuuro jinsiga ku saabsan. Halkii jeer ee ay galmo dhacdo, waxaa gudaha cambarka gala qiyaastii milyan gujrka xawo ah, ha yeeshee dhowr boqol oo qura ayaa gaara ugxanta.
Kolka ay caadada xigtaa timaadana, waxay ka tuuraysaa 15 maalmood si ay u hubsato inay saxsan tahay raaxada guurka raaxad.
raaxada guurka Markaasi oo kale waxa habboon in raaxada guurka arrinka u arko inuu raaxada guurka wax iska caadi ah, haddii ay u caddaato waxa laysku haystaa inay wax fudud yihiinna waxa habboon inayba faraha kala baxaan oo aanay soo dhex gelin, carruurtu markaa iyagaa umuurohooda dhexdooda ka xallinayee.
Fitamiinka waxa laga helaa khudaarta caleenleyda ah iyo firileyda sida qamadiga. Isku biyabbaxa habeenkii qofka kuma keeno tamar darri, maadaama aanay qanjirradiisa taranku daallayn, waxayna awoodaan inay hal jeer habeenkii biyo tuuraan, saana ku wadaan muddo soddon sanadood ah. Ninku waa inuu xubnihiisa taranka geedkiisa biyo iyo saabuun ku mayro ugu yaraan hal jeer maalintii. Labada qof midkood raaxada guurka ayaa bushimaha kan raaxada guurka marna si xoog ah u daliigaya marna si aayar ah, fooddooduna waxay mar qabataa foodda kuwa kale marna sii deysaa.
Qofkastana waxa uu dareemayaa ahmiyada uu ku leeyahay qoyska. Sidoo kale dhunkashada xagasha lugtu waxay dhalisaa dareen sii kordha kolba marka loo sii socdo dhanka cajarrada ama bowdooyinka loona sii dhowaado xubnaha taranka, sababta oo ah hadba intay meeliba meel kaga sii dhowdahay xubnaha taranka maqaarkeedu waa uu ka sii jilicsan yahay, kana dareen kulul yahay ilaa laga gaaro xubnahaasi.
Waxan ula jeedaa xitaa hadday yihiin laba gabdhood ama laba wiil. Dumarka caynkaasi ahi waxay u badan yihiin kuwa aan weli bislaan iyo kuwa qaba qabow jinsiyeed ereygaasi raaxada guurka sida caadiga ah raaxada guurka yeero dumarka aan galmada ku raaxaysan. Waa inay isku dayaan inay jeclaysiiyaan dhallaanka cusub, kuna qanciyaan inuu walaal u noqon doono, uu la cayaaro isna kaashan doonaan.
ragga raaxo ay la ooyaan ayey ka helaan baashaalka nocaan ah… | Welcome to this website
Waxa uu raaxada guurka tartamayaa booskiisii maadaama uu madi ahaan jiray. Anonymous Walaal naag naag kale inay u kacsato ma aha, raaxada guurka waxay khilaafsantahay qaanuunka kowniga, marka waxaa laga yaabaa inaad ka qaaday dareenkan filin xun ama sheeko ku saabsan lesbiyaan, marka iska joogi oo la dagaalan, nin guurso oo iska sax dhaqanka qaldan fikrigaaga ku koob ninkaaga keliya.
Ha yeeshee culimada diinta qaarkood iyo dhakhaatiirta caafimaadka raaxzda, waxa habboon bay leeyihiin raaxada guurka hooyada cusub nasasho la siiyo muddo dhowr usbuuc ah, intay wax waliba caadigoodii kaga soo noqonayaan. Dumarka qaar kolka uu dhiigga nifaasku ka dhammaado, cambarkooda wax qoyaan ahi kama yimaadaan oo wuu qallalan yahay. Maqaalkaan waxan kusoo afjarayaa buraambur ay tirisay gabar Soomaaliyeed oo ka dhiidhinaysa gudniinka Fircooniga raaxada guurka, kuna boorrinaysa dumarka inay u hub qaataan dabargoynta caadadaasi xun een dhaawac mooyee dheef kale lahayn:.